Mamono ireo mikraoba – 99,99% Malemy paika amin'ny fanadiovana tanana na hoditra 100 torolalana ho an'ny mpamosotra Aza aseho taratra amin'ny tara-masoandro mivantana, aleo apetraka amin'ny toerana mangatsiaka izy ireo. Aza ampiasaina amin'ny fanaka. Aza kosehina ny trano fidiovana, ario ao anaty receptier-pako. Esory ny sarony ary sokafy ny tombo-kase. Sintomy ny corer an'ny ravina afovoany, ahodino izany ary asio kofehy amin'ny alàlan'ny dispenser mizara ny sarony. Tsoahy amin'ny zoro ny ravina. Rehefa vita ny fonony akaiky ny rakotra hitazomana ny hamandoana. Ny famaohana mando bakteria dia mety amin'ny q ...
Product Product Easy Wonderful Brand High Quality 2ml Hand Sanitizer Gel Main Ingredient 75% Alkohol Function Fanasana tanana Volume 2ml / PC MOQ 50000 pcs fampitandremana: mora mirehitra, manalavitra ny ankizy na ny lelafo. Ho an'ny fampiasana ivelany ihany. Aza ampiasaina amin'ny masonao.Raha sendra maso tsy nahy amin'ny masonao ianao dia velomy ny rano amin'ny masonao. Manantona dokotera. Atsaharo ny fampiasana raha miteraka fahasosorana na mena. Raha maharitra 72 ora mahery ny aretina dia manatona dokotera. Aza miditra amin'ny ...
Hamafa taratasy ara-pahefana tondra-taratasy taratasy sachet taratasy + pe + alu lanja 35-40gsm, soloina namboarina habe 12 * 15cm, 15 * 15cm, 10 * 19cm, 14 * 19cm na haben'ny sachet namboarina 5 * 5cm, 5 * 5.7cm, 5 * 7cm, 6 * 8cm, sns. kitapo, 2000pcs / cncarton habe manodidina ny: 45 * 28 * 23cm Certification ISO9001: 2000, MSDS M ...
Sheet Material Non tenona, spun lace Sheet Size 120 * 150mm120 * 180mm (tsy voatery) 120 * 200mm (tsy voatery) Taratasy taratasy kitapo + Alv + PE PET + Alv + PE Bag habe 60 * 80mm akora mahery Benzalkonium klorida, Nov-tenona, Ro -Rano LOGO OEM NA SAMPELAN'ANDRIAMANITRA Fampiasa maimaimpoana ho an'ny famonoana mikraoba ho an'ny fanadiovana ny tanana sy ny tarehyHo fanesorana ireo tasy amin'ny akanjo Ho an'ny fanadiovana kiraro Ho an'ny fanadiovan-solomaso, telefaona, pad, solosaina, efijery sns sns na azonay atao araka izay takinao. Andininy momba ny vokatra: Benzalkon ...
Vokatra mafana, Sitemap, Taratasy fikasana tsara indrindra, Tissue fanadiovana lens, Famafana lamba isaky ny mifono, Sunscreen Wipe,